Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ စပိန်ဘောလုံးကစားသမားများ Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးစတားများ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Little က Magician"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိအဖြစ်မှန်ယနေ့အထိသူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, ဆက်ဆံရေးဟာဘဝ, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းမိမိအမြန်ဆန်အရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Hector Bellerin ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Hector Bellerín Moruno ဘာစီလိုနာ, စပိန်အတွက်မတ်လ 19 ၏ 1995th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူဟာမွေးခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကိုအတည်ပြု Pisces ဖြစ်ပါတယ်။ Hector မစ္စတာနှင့်မစ္စ Maty Moruno နှစ်ဦးစလုံး, စပိန်နှင့် Catalonia ၏နိုင်ငံသားမှမွေးဖွားခဲ့သည်။
Hector6၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေဘာစီလိုနာလူငယ်စနစ်အတွင်းကသူ၏ဘောလုံးရက်ပေါင်းစတင်ခဲ့သည်။ သူဟာဘာစီလိုနာဘောလုံးဟာတိုက်စစ်အတွက်ဒဿနနှင့်မညာတောင်ပံဖွဲ့စည်းရေးသင်ယူခြင်း 8 နှစ်ပေါင်းနေခဲ့ရသည်။
တောင်မှကလေးတစ်ဦးအဖြစ်နေစဉ်, Hector သည်သူ၏လျှပ်စီးအရှိန်အဟုန်မိတ်ဆက်ပြသခြင်းနှင့်ဘာစီလိုနာမှာမိမိအချိန်ကာလအတွင်းကစားစတိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်း။ အတော်ကြာအခါသမယတွင်သူသည်မဲပေးခံခဲ့ရ '' ပြိုင်ပွဲ၏က Man '' ပြိုင်ပွဲ၌တည်၏။ မိမိအလူကြိုက်များမှု 2008 မှာမြင့်တက် သူ Zinedine ဇီဒန်းကပေးပို့တဲ့ခဲ့သောပြိုင်ပွဲဆုချီးမြှင့်၏လူပေးထားခဲ့သည်ဘယ်မှာမက်ဒရစ်အတွက် Canillas အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချန်ပီယံ။
တိုင်း FC အသင်းဘာစီလိုနာပရိတ်သတ်Bellerínကိုချစ်၏။ သူတို့ကသူ့ကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်အပေါ်ယူပြီး၌သူ၏အရှိန်အဟုန်ကိုအသုံးပြုဖို့အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ခုခံကာကွယ်အနေအထားမှအလျင်အမြန်ပြောင်းရွှေ့ရန်စောင့်ကြည့်ဝမ်းမြောက်ဆင်းသက်လာ။ သူတို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သည်လူတဦးတည်း, အာဆင်နယ်အားဖြင့်တိုတောင်းဖမ်းမိခဲ့သည်။
ရုံနဲ့တူ ဖာဘရီဂက်စ်, 16 တစ်ဦးနူးညံ့နှစ်အရွယ်တွင် Bellerin မြောက်လန်ဒန်အာဆင်နယ်အားဖြင့်ကွယ်ပျောက်လုယူခဲ့ပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
ကွင်းပေါ်နဲ့ off Hector Bellerin ရဲ့ဘဝအင်္ဂလန်၌မိမိရောက်ရှိကတည်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလှည့်လွှဲပြောင်းယူလိုက်ပါတယ်။ သူကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မော်ဒယ် Shree Patel ကနဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Hector နှင့် Shree Patel က
မှောင်မိုက်ဆံပင်အလှလန်ဒန်မြို့တွင်နေထိုင်သောနှင့်အိန္ဒိယအမြစ်များရှိပါသည်။ သူမသည် '' ဟုခေါ်ဝေါ်သော Calvin Klein နှင့်အားကစားအမှတ်တံဆိပ် Ellesse များ၏အကြိုက်ဘို့လုပ်ပါတယ်နှင့်သူမ၏ Instagram အကောင့်အပေါ် 20k နောက်လိုက်ထက်ပိုရှိပါတယ်ရဲ့iamshree'' ။
Shree သူတစ်ဦး 16 နှစ်ရှိယောက်ျားလေးအဖြစ်လန်ဒန်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသောအခါ Hector တိုက်ခိုက်ရေးအထီးကျန်ကူညီနေသူဦးတည်းသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုံသာသည်သူ၏ဆိုက်ရောက်၏တစ်လပြီးနောက်ဆက်ဆံရေးကိုစတင်ရယူခြင်း, Hector ဤမြို့ကိုလန်ဒန်လုံးဝပျောက်နှင့်တစ်ဦးတည်းခံစားမိခဲ့ပါဘူး။
နှစ်ဦးစလုံး lovebirds သူတို့ကိုယ်သူတို့၏ဓါတ်ပုံများကိုမျှဝေလိုအားလုံးတက်ကိုချစ်၏။ အောက်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံတစ်ဦးလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်ခြေ shared ခဲ့သည်။
Hector နှင့် Shree, ရှိသမျှတက်ကိုချစ်၏။
အိုင်နားမှာအရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်းအမှန်ပင်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဆွေတို့ကိုဝေမျှ, တဦးတည်းကအရမ်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အချိန်မရွေးမကြာမီသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုကြေညာမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေအံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်။
အိုင်နားမှာအရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်း Hector နှင့်ရည်းစား,
Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တစ်ဦးကကော့ Lover
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရွေ့လျားတစ် 16 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်, Bellerínကြိမ်အကောင်းဆုံးမှာစိန်ခေါ်အင်္ဂလန်မှာဘဝတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကဘာသာစကားအခက်အခဲနှင့်အာဆင်နယ်အကယ်ဒမီ၏ခက်ခဲတဲ့လေ့ကျင့်ရေးစစ်အစိုးရနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အကူအညီလိုအပျ။
သူ၏အသက်တာသည်အလွန် hectic ခဲ့သူတို့ကသူ၏ကျော်ကြားမှုမှသူတို့ကိုအာရုံအားမိမိတစ်ဦးတည်းသောကာလ၌လုပျနိုငျအရာများစွာကိုရှိနေကြသည်မဟုတ်။ သူ့ရည်းစားနဲ့အချိန်ဖြုန်းဘေးဖယ်, Hector PlayStation4အပေါ် Duty ၏ခေါ်ဆိုမှုကစားရန်နီးပါးအပေါင်းတို့သည်သူ၏အချိန်သုံးစွဲသည်။
သူသည်စော်ဘွားမှာညာဘက်ခြမ်းကိုတက်ဖြတ်မရင့်လာသောအခါအကောင်းဆုံးကတော့, သူမှထုတ်ပြန်သောသည်သူ၏ PlayStation console ၏ခလုတ်နှိပ်ပါတယ်။ အောက်တွင် Duty Event တစ်ခုခေါ်ရန်မှာမိမိအင်တာဗျူးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကနဦး Duty ၏ Call, ငါးနှစ်သူလူကြိုက်များဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသေနတ်သမားဗီဒီယိုဂိမ်းအပေါ်ချိတ်ဆက်ရဲ့လိုင်းဆင်းဖို့သူ့ကိုမိတ်ဆက်သူ၏ U18s အသင်းဖော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Bellerínသူဂိမ်းကစားခြင်းကိုစတင်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးနှစ်နှစ်အတွက်သူတာရှည်လေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်တနေ့လုံးကြောင့်ကစားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နှင့်အင်တာဗျူးတွင် နေမင်း, Bellerínအောက်ပါအချက်များကိုကဆိုသည်။ "ဒါဟာငါ့အဘို့စိတ်ဖိစီးမှုလွှတ်ပေးရန်ပါပဲ။ ငါသည်ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူရယ်သည့်အခါဒါမှငါများသောအားဖြင့်သာ Cod play, ကစားရန်ကြောင်းအချိန်အများကြီးမရကြဘူး။ "
သူ့ရည်းစားနဲ့အတူ Cod နှင့်အသုံးစရိတ်အချိန်ကစားဘေးဖယ်, Hector များသောအားဖြင့်အားလုံးရုပ်ရှင် rapt အာရုံစိုက်မှုအတွက်ပေးသောမိမိခွေးနှင့်အတူတီဗီရုပ်ရှင်စီးရီးစောင့်ကြည့်ဖို့နှစ်သက်တော်မူ၏။
Hector နှင့်ရုပ်ရှင်တစ်ခု rapt အာရုံစူးစိုက်မှုပြသသောမိမိခွေး
Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -သူ Theo Walcott ထက်ပိုမြန်မယ့်
သူကနောက်ကျော 2006 အတွက်ကလပ်မှာရောက်ရှိစဉ်အဆက်ကတည်းက Theo Walcott မြောက်လန်ဒန်အမြန်ဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2014-15 ရာသီရဲ့အစမှာသူကချိုးဖဲ့ Theo Walcott'' s ကိုတစ်စက္ကန့်များ၏ 40 / 1th အားဖြင့် 100 မီတာအာဆင်နယ် Sprint စံချိန်။
Theo Walcott'' s ကို 40 မီတာမှာစံချိန် 4.78 စက္ကန့်ခဲ့ပေမယ့်စပိန်ပြန် 4.77 အတွက် 2015 အချိန်နဲ့ပဲရှိတယ်။ သို့သော်အစီရင်ခံယခုBellerínတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် 4.42 ဆင်းသောအခြိနျကာလကိုရိတ်လိုက်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
တကယ်တော့အာဆင်နယ်နောက်ခံလူသူပင် outrun နိုင်မည်အကြောင်းဒါကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် "Triple-Triple" ကိုရွှေသူ 4.64 မီတာ Sprint များအတွက်ကမ္ဘာ့စံချိန်သတ်မှတ်ထားသည့်အခါပထမဦးဆုံး 40-မီတာကိုဖုံးလွှမ်းရန် 100 စက္ကန့်အတွင်းအသုံးခံသွားပါတယ်တဲ့သူ Usain Bolt က, medalist ။
အင်တာနက်ကိုဆည်းပူးနေအသိပေးစာနှင့်အတူBellerínနှင့် Bolt ကနှစ်ဦးစလုံးသည်အခြားမှတဆင့်တဦးတည်းစိန်ခေါ်သဖြင့်ပျော်စရာပင်ပွူခဲ့မ တွစ်တာ။ တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, Hector ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူသည်။
Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မမှန်မကန်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရခံရ
2013 ၏ဆောင်းရာသီကာလအတွင်း Arsene Wenger ချန်ပီယံရှစ်ဘက် Watford မှချေးငွေအပေါ်အဟောင်းအလွန်-rated 18 နှစ်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုကာလများတွင်စပိန်သာ 8 ပွဲနှင့်များစွာသောအာဆင်နယ်ပရိတ်သတ်တွေရတဲ့အကြောင်းရင်းနားမလည်နိုင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကကလေးငယ်သူလိုအပ်တဲ့မိနစ်ရတဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သကဲ့သို့, အာဆင်နယ်နှစ်ခုသာလအကြာကသူ့ကိုပြန်ပြောပြ။
Hector တစ်ချိန်က Watford အားဖြင့်မှားယွင်းစွာစီရင်ခြင်းကိုခံရခဲ့သည်
နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Watford ကပ္ပတိန် Troy Deeney ကို, La Masia ဘွဲ့ရ Vicarage လမ်းမကြီးမှာဒါအနည်းဂိမ်းကစားအဘယ်ကြောင့်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်ပေးတော်မူ၏။ သူကအချိန်မရွေးမန်နေဂျာ Giuseppe Sannino သည်စပိန်မှမိမိဘက်များအတွက်ကစားရန်ကိုကာကွယ်သင့်လျော်ကိုင်တွယ်နှင့်မအတွက်အရမ်းပေါ့ပါးဖြစ်တွေ့ဖော်ပြခဲ့တယ်။
Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အဆိုပါကူးပြောင်းခြင်း
မိမိအရှိန်ပြင်းထန်တဲ့နေ့တွေမှာအရှိန်အဟုန်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်သွားပေးပြီနိုင်ဘူး။ သို့သော်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရှိသူ၏အချိန်မတိုင်မီ Hector Bellerínဘာစီလိုနာအတွက်တောင်ပံကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကမြောက်လန်ဒန်သို့ရောက်သောအခါဒါဟာအပြည့်အဝပြန်လည်အသွင်ပြောင်းတယ်သာဖြစ်ခဲ့သည်။
အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် ဝင်းဂါး မိမိကိုယျကိုသူတစ်ဦးကို right-ကျောသို့မဟုတ်မသို့ကိုယျတျောကိုဖွင့်ဖို့ရှိမရှိအပေါ်နောက်ဆုံးခေါ်ဆိုခဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါပြင်သစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကာကွယ်ရေးအားမိမိအကူးအပြောင်းလျော့ပါးအားကူညီနိုင်ရန်လူငယ်နှင့်တသားတအစည်းအဝေးများအပေါ်တဦးတည်းရှိသည်ဖို့လက်ထောက်နည်းပြစတိဗ် Bould တာဝန်ပေးအပ်။ Bould ဘယ်လိုခြစ်ရာကနေခုခံကာကွယ်ဖို့သူ့ကိုသင်ပေးခဲ့ရတယ်။
Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တစ်ခုကဘွဲ့ကြို
2016 ခုနှစ်, Hector Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Philadelphia တွင်တစ်အိုင်ဗီလိဂ်ကျောင်းတွင်အွန်လိုင်းမှသင်တန်းစာရင်းသွင်း။
Bellerin စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဒီပလိုမာလိုက်စားနှင့်ကျောင်းရဲ့ website တွင်စာမေးပွဲပြီးဆုံးအွန်လိုင်းနှင့်လည်းပို့ချချက်ကိုချောင်းမြောင်းနေပါတယ်။
Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တက်တူးထိုးအချက်အလက်
Hector Bellerin လိုင်းဆင်းသည်သူ၏မြန်ဆန်ပြေးဘို့လူသိများသည်ဒါပေမဲ့သူလည်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်အနုပညာများအတွက်ကျော်ကြားမှုရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါစပိန် speedster ကသူ့လက်ဖျံရဲ့အရှည် spanning အပျိုကညာမာရိ၏ပုံရိပ်တစ်ခုပါဝင်သောလက်ျာလက်ရုံးတော်ကိုဆင်းမယ့်တစ်ဦးအပြည့်အဝစွပ်အိတ်ရှိပါတယ်။
Hector တစ်ချိန်က said: "ကျွန်မရဲ့အဘွားကအမြဲသူတို့ကိုငါ့အဘို့ကိုဝယ်ဖို့အသုံးပြု, ငါ့ပထမဦးဆုံးတဦးတည်း, ထိုပုတီးခဲ့, သင်မူကားမည်သည့်ရတနာဝတ်ဆင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိသာသူတို့ကိုငါနှင့်အတူမကစားနိုင်။ "ဒါကြောင့်ငါကမှာတော့တက်တူးတွေနဲ့ရဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါကပြုသမျှနှင့်ငါ့ကအရမ်းပထမဦးဆုံးခဲ့သောအခါငါ 15 သို့မဟုတ် 16 န်းကျင်ခဲ့တာထင်ပါတယ်။
Hector ကိုလည်းချိုးငှက်နှင့်မိသားစုနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုတက်တူးထိုးရှိပါတယ်။ အဆိုပါဧရာမ '' မိသားစု '' မိမိအဝမ်းကွဲ, အဖွားအို, နှမ, ငါ့မိခင်နှင့်အဖေနှင့်အ grandad နှင့် Bellerin နွယ်စု၏ကျန်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ Hector အဘို့, အရာအားလုံးငါ့အလိုရှိသမျှမိသားစုအကြောင်းပါ။
Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
Hector Bellerín Moruno တစ်ကာတာလလူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံကနေလာပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာ Maty Moruno အဖြစ်လူသိများသည်သူ၏မိဘများ, ကာတာလဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာ6တစ်ဦးနူးညံ့နှစ်အရွယ်တွင် FC အသင်းဘာစီလိုနာမှသူတို့၏သားကျိန် ဆို. ပူဇော်။ ဘောလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတည်းကပိတ်ထားပေးဆောင်ခဲ့သည်။
Bellerin တစ်ချိန်ကသူ၏မိဘများနေထိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်ရှိရာလန်ဒန်မြို့တွင်အသစ်တခုအိမ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သူတို့ကအနီးကပ် Hector မှလန်ဒန်တှငျနထေိုငျခဲ့သညျ။ ပိုများသောမကြာသေးမီကသူသည်ဘာစီလိုနာအတွက်အခြားအိမ်သူအိမ်သားဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဤသည်အာဆင်နယ်ထွက်ပေါက်ကျော်ထင်ကြေးများကြားတွင်လာ၏။
Hector Bellerin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ရာသီခွင်တဲ့လက္ခဏာရပ်တွေ
Hector Bellerin Pisces အတည်ပြုခဲ့သည်နှင့်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောက်ပါ attribute တွေရှိပါတယ်လျက်ရှိ၏
Hector Bellerin ရဲ့အားသာချက်များ: , သနားကြင်နာတတ်တဲ့အနုပညာအလိုလိုသိ, နူးညံ့သိမ်မွေ့, ပညာရှိ, ဂီတ။ Hector Bellerin ရဲ့အားနည်းချက်: အဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်ရန်ကြောက်, အလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချ, ဝမ်းနည်းဖွယ်, အလိုဆန္ဒ, တစ်သားကောင်သို့မဟုတ်တစ်အာဇာနည်နိုင်ပါတယ်။ Hector Bellerin အဘယ်အရာ likes: တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်း, အိပ်, ဂီတ, အချစ်ဇာတ်လမ်း, အမြင်အာရုံမီဒီယာ, ရေကူးခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာ themes များ။ Hector Bellerin နှစ်သက်မှုမရှိကဘာလဲ: သိကြ-It-ရှိသမျှတို့, ဝေဖန်ခံနေရ, အတိတ်ရဲခြောက်များနှင့်မဆိုကြင်နာ၏ရက်စက်မှုပြန်လာမယ့်။
Hector Bellerin ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရိုင်းတိရိစ္ဆာန်: သူဟာသူ့ရဲ့ likes ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သည်သူ၏အနှစ်သက်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်ကျားကပြောပါတယ် "ဆာလောင်မွတ်သိပ်"။ ဆိုလိုခြင်းအားဖြင့်, ဒီစပိန်အောင်မြင်မှုများအတွက်လိုအပ်သောအစာစားချင်စိတ်ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hector Bellerin ရဲ့ငယ်ဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
Nacho ဖာနန်ဒက်ဇကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်